La Liga oo ugu dambeyn soo kordhinaya VAR kaddib goolkii laga diiday Messi – Gool FM
(Spain) 28 Nof 2017. Madaxwaynaha La Liga Javier Tebas ayaa rajeynaya inuu xilli ciyaareedka soo socda soo kordhiyo (VAR) muuqaalka caawiya garsooraha si looga fogaado in la ansixin waaye goolasha sida midkii Messi oo kale.
Laacibka reer Argentina ayaa gool cad laga diiday ciyaartii ay Barcelona axadii bar baraha 1-1 la gashay Valencia horyaalka La Liga.
Kubbada ayaa si loo wada jeedo dhaaftay diilinta goolka, balse garsoorayaasha ayaa isku raacay inaysan gool ahayn.
Tebas ayaa sheegay inuu rajeynayo in mustaqbalka dhow laga fogaado inay soo laabato howshan oo kale isagoo soo kordhinaya VAR.
“Goolka waxaa laga arkay Spain oo idil iyo dhammaan daafaha caalamka.” Madaxwaynaha ayaa sidaa yiri.
“Haddii aan iraahdo gool ma ahayn waxaad ii sheegeysaan inaan indhoole ahay, wuxuu ahaa gool wax kalena ma jiraan waxaan rajeynaynaa in xilli ciyaareedka xiga innagoo kaashaneyna VAR aan xalin karno arrimahan.
“Waxaan ka shaqeynaynaa inaan VAR heysano kal ciyaareedka soo socda.”.